ကျောင်းပတ်လည် – PoemsCorner
သတိရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ရေနံချေးဝနေတဲ့ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ မတော်တော့ဘူး။ ကျပ်နေပြီ။ ကျောင်းစိမ်းပုဆိုးကလည်း ခါးနဲ့ဆို ကွင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်လို့။ ခြေသလုံးတွေပေါ်တဲ့အထိ အနံကတိုနေပြီ။ ကျောင်းထဲမှာရုပ်ရင့်နေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပဲရှိနေကြတယ်။ စာမေးပွဲခန်းလို့ သတိပြုမိလိုက်မိပြီး စာသင်ခုံပေါ်ကအဖြေလွှာစာရွက်ကို ကျကျနနဘေးမျဉ်း တား၊ မေးခွန်းစာရွက်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းထဲချာချာလည်သွားတယ်။
“ဒါဇီဝဗေဒမေးခွန်းပဲ” ….. အစအဆုံးဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်ခဲ့လား မသိလိုက်ခင်မှာပဲ ဆွမ်းစားဆောင်ရဲ့အပြင်ဘက် အင်ကြင်းပင်အောက် မှာရောက်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပြုမိတယ်။ ကမ္ဘာကျေပေမဲ့ ဥဒါန်းမကျေဘူးဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အလယ်တန်းသမိုင်းဆရာမရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကစူးရဲတောက်ပလို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်ရှိသူလိုမျိုး ခံစားလိုက်ရတယ်။
မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ လျှာကလေးကိုမကြာခဏထုတ်ပြလေ့ရှိတဲ့ကောင်မလေး ကိုယ့်ဘက်လျှောက်လာတာ ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြုံးပြလိုက်တယ်။မိုးဖွဲဖွဲလေးတစ်စက်နှစ်စက်ကျလာတယ်။ လွမ်းသလိုလို။ စီးကရက် တစ်လိပ်ကို ကျောင်းအပြင်ဘက်မှာ ပြေးဝယ်ပြီး အဆုတ်ထဲနက်နက်ပျံ့သွားအောင် ရှိုက်လိုက်မိတယ်။ ကော်ဖီခါးခါးက ပိုခါးနေသလိုပဲ။ ကျောင်းရှေ့တည့်တည့်ကလမ်းကြားမှာ ဖြစ်သလိုအမိုးမိုးထားတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကလေးထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရယ်။ ဘယ်သူမှမရှိကြဘူးလား? ဆိုင်ရှင်ရော? စားပွဲထိုးလေးရော? ဒါဖြင့် ခုသောက်နေတဲ့စီးကရက်နဲ့ ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်ကဘယ်နားကရောက်လာပါလိမ့်?
မိုးတိတ်သွားပြန်ပြီ။ ဘတ်စ်ကားအဝမှာတွယ်စီးလာတော့ လမ်းတလျှောက် ပန်းအဝါပွင့်တဲ့အစိမ်းရောင်ချုံဖုတ်တွေ ရိပ်ကနဲရိပ်ကနဲ။ ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့။ ဆောင်းရနံ့ဆိုင်ထဲကဘီယာတစ်ခွက်၊ ရမ်တစ်ပက်ရောပြီးမော့လိုက်တဲ့အခါ လည်ချောင်းထဲ၊ ရင်ထဲ တဖြည်းဖြည်းနွေးလာတာ သတိရမိတယ်။ ပြီးတော့စီးကရက်နဲ့အရက်ကို တပြိုင်နက်ဖြတ်လိုက်တာ ခြောက်နှစ် ရှိပြီဆိုတာလည်းဖျတ်ခနဲသတိရလိုက်တယ်။
ထုံးစံအတိုင်းကျောင်းကို နောက်ကျမှရောက်ပြန်ပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆန်းရဲ့ အသံတိုးတိုးကို သီရေတာထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်ကြားနေရလို့။ လှေခါးအတိုင်းတက်အလာ အပေါ်ထပ်ကဆင်းလာတဲ့ဆရာစိုးနဲ့အတွေ့ ဆရာကမေးဆတ်ပြတယ်။
ခေါင်းပြန်မော့လိုက်တော့ ဂရုတစိုက်ရှိလှတဲ့စေတနာမျက်ဝန်းတွေကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။ ရင်ထဲမှာနွေးလိုက်တာ။ အပြင်မှာမိုးသံတဝေါဝေါနဲ့ သည်းလာပြန်ပြီထင်တယ်။ ကွန်ပျူတာကိုအိတ်ထဲထည့်သိမ်းလိုက်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမှတ်တမဲ့ပြန်အကြည့်မှာ အင်္ကျီအဖြူအစိမ်းနဲ့ မဟုတ်တော့တာကိုသတိပြုမိတယ်။
ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ အပြာနောက်ခံမှာစိတ္တဇဆန်ဆန် တိမ်မျှင်အဖြူလွှလွှများ။
ခဏတော့ အရသာခံ ငေးကြည့်နေမိသေးတယ်။
ရေနံချေးဝနေတဲ့ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ မတော်တော့ဘူး။ ကျပ်နေပြီ။ ကျောင်းစိမ်းပုဆိုးကလည်း ခါးနဲ့ဆို ကွင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်လို့။ ခြေသလုံးတွေပေါ်တဲ့အထိအနံကတိုနေပြီ။
Thanks to KSL and Ma Lay May
In: စကားပြေ Posted By: wordsareflowingoutlikeendless Date: May 7, 2012
လွမ်းစံပယ် – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
ည ……. ရူး ခြင်း
ကျွန်တော့် ရဲ့ သူ
Leave comment No comment & 144 views